Zava-mahadomelina momba ny virosin'ny virosiny: Mialà sasantsasany amin'ny tontolon'ny natiora
naoty 4.69 avy tany 5
naoty 4.79 avy tany 5
Hairy Hair Bundles
naoty 4.80 avy tany 5
Ny VIRGIN REMY VEHIVAVY VEHIVAVY
Eto aho ao amin'ny My Natural HIAr Extensions, mirehareha amin'ny vokatra izahay. Ny fanitarana antsika dia nohariana sy noforonina ho an'ireo vehivavy loko amin'ny lokon'ny vehivavy! Ny marika dia mitondra virjiny Remy. Ny virjina dia midika fa ny volo dia maimaim-poana amin'ny zavatra simika masiaka, ary ny Remy dia midika fa ny kodiarana amin'ny volo dia mifangaro amin'ny lalana iray ihany koa mba hampihenana ny olana momba ny olana. Manana fanitarana izay mikarakara ny anabavinay rehetra izahay. Ny orinasanay dia mety antsoina hoe "Ny Hair Extensions Hair" fa izahay koa dia manitatra ny divasanay misakafo!
Ny endriny voajanahary voajanahary dia maneho ny Curly, Kinky Curly, Coily, ary Afro Kinky! Azoko antoka fa afaka mahita ny lafarinina tonga lafatra ianao. Ny tsipika mitongilana mivantana dia manasongadina ireo tahiry Perm Yaki, Coarse Yaki, ary Kinky Straight. Ireo ampahan-tsainay rehetra dia mitovy amin'ny famaranana. Voatery atolotra tsy ho ela ny frontale. Ny poketranay dia avo lenta 100% virijina virjiny virjiny.
Raha mamaky izany ianao, dia eo amin'ny làlana mahitsy mba hahazoana ny ampahany betsaka indrindra amin'ny fanitarana izay tsy vitan'ny mibontsina fotsiny amin'ny volonao fa mampiroborobo ny volo. Ny fampitomboan'ny fampiasana araka ny tokony ho izy dia mety hanampy ny volonao ary miteraka lamaody mahatalanjona. Atsaharo ny manala ny fivoahanao ary miezaka mifangaro amin'ny fananganana virijina virjina Breziliana hafa. Ampitomboy ny volonao voajanahary, aza manova azy!